eLogbook ကိုပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းမှု - ရေကြောင်းဆိုင်ရာအခြေခံ
သင်၏ iPad, tablet သို့မဟုတ် desktop ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းများသိမ်းရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်
196 စာမကျြနှာ • 50 + ရေးဆွဲ • စာရင်း • စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း • ရိုက်ထည့်ပါ • အစီအမံ
ကိုနှိပ်ပါ & ဖြည့်ပါ အပိုင်းဂဏန်းများ
လုပ် & မော်ဒယ်များ
နှိပ်လင့်ခ်ျ & ရက်စွဲများ
50 + ရေးဆွဲ
ပြီးပြီအလုပ်များကို & အစိတ်အပိုင်းများကို installed
အတိုင်းအတာ & Calculator ကို
သော့ခလောက် - မက်ထရစ် & ညီမျှသောအရွယ်အစား
ဒdecimalမ & ဒalမကိန်းလက်မအတွက်မီလီမီတာ
မီလီမီတာအတွက်ဒdecimalမ & ဒincမကိန်းလက်မ
ကိုးကားရန်နှိပ် link များ
အခမဲ့ app ကို download လုပ်ပါ။ Xodo.com
iOS Android ၀ င်းဒိုး
အထူးသတိပေးချက်: အဆိုပါ eLogbook အသုံးပြုသည် ဖြည့်စွက်ပုံစံများ နှင့်ထောက်ပံ့သော PDF app ကိုလိုအပ်သည် ဒီ app ကအခမဲ့ app ပါ Xodo PDF ဖိုင်ရယူရန် Reader ကို & Editor ကို။ Acrobat Reader သည် Fill & Sign ကိုသက်ဝင်သောအခါအိုင်ပက်ဒ်နှင့်တက်ဘလက်များတွင်သာဤလုပ်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့သည်။
ဒီကို download လုပ်ပါ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု eLogbook SAMPLE eLogbook သည်သင်၏စက်ကိရိယာများ (2MB ဖိုင်) ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်းစစ်ဆေးရန်။
ထုတ်ကုန်များမှပုံသေ PDF reader သည်စာရွက်စာတမ်းကိုဖွင့်ပေးသော်လည်းအများစုသည်စာသားအကွက်များအတွင်း၌ထည့်သွင်းထားသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရေးသားရန်နှင့်သိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်သည့်အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်မှုများကိုမထောက်ပံ့ပါ။
iOS 11 ကိုအထောက်အပံ့မပြုတဲ့ iPads ဟောင်းများ မဟုတ် အစဥ္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတတ္မႈအတြက္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ရန္။ ဖြည့်စွက်ပုံစံများ.
ဒီ iPad ကိုလိုက်နာပါ လမ်းညွှန် install လုပ်ဖို့အခက်အခဲရှိရင်
Kindle သို့မဟုတ်အခြား ebook စာဖတ်သူများကမပံ့ပိုးပါ ဖြည့်စွက်ပုံစံများ PDF ။
ကျေးဇူးပြု၍ ဤစာရွက်စာတမ်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။ စကားဝှက်မလိုအပ်ပါ။ ပေါ်လာနိုင်သည့်ကန့်သတ်ချက်များသည် ၁) pdf အက်ပလီကေးရှင်း (အစား Xodo ကိုသုံးပါ) သို့မဟုတ် ၂) သင်၏စက်ထဲရှိဆက်တင်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
7 ကို MB ဖိုင်
14 ကို MB ဖိုင်
နမူနာ - သင့်ကိုယ်ပိုင်တန်ဆာကိုအဖုံးပေါ်တွင်တင်
အခမဲ့ လမ်းညွှန် Xodo PDF ကို အသုံးပြု၍ ဓာတ်ပုံကို eLogbook ထဲသို့ထည့်သွင်းနည်း
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာများဖြစ်သော iPad, tablet နှင့် desktop ပေါ်တွင် eLogbook အသုံးပြုရန်လိုင်စင်တစ်ခုဝယ်ယူနေသည်
၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည် eLogbook သည်သင်၏စက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်သင်၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရရှိမည်ကိုသင်ကျေနပ်ရောင့်ရဲစေသည် (အခမဲ့စစ်ဆေးရန်နမူနာကိုဖွင့်ပါ)
Marine Diesel Basics စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်သည်သင်၏ဒီဇယ်စနစ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကူညီရန်ဖြစ်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ကြံ့ခိုင် - ရေပေါ်တွင်သင်၏အချိန်ကိုပိုကောင်းအောင်။
သင့်ရဲ့အလုံးစုံ rating တစ်ခဲ့သည် Rating ကို Select လုပ်ပါ5 ကြယ်4 ကြယ်3 ကြယ်2 ကြယ်1 စတား
ဂရိတ်စာအုပ် - ကြောက်စရာကောင်းသော eLogBook
ကျွန်ုပ်၏အခြားစာများဖြည့်စွက်ရန် Dennison Berwick's Marine Diesel Basics (Nigel Calder, Peter Compton နှင့် Don Casey ။ ကျွန်ုပ်သည်စာအုပ်ကိုနှစ်သက်ပြီးကြယ် ၅ လုံးပေးသည်။ ) ထို့ကြောင့် Dennison ကို ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်၏ eLogBook ကို ၀ ယ်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်မဝယ်ပါ။ dongle သို့မဟုတ်အခြားအမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုတဲ့ software ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုကို ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Tech စက်မှုလုပ်ငန်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံကနေသူတို့ဟာပြproblemနာရှိပြီးပရိုဂရမ်နဲ့ဒေတာဆုံးရှုံးမှုအထိဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်။ ကောင်းပြီငါဒီကိစ်စတှငျမှန်ကန်သောသက်သေပြခဲ့ကြသည်။ ငါဒေတာထည့်သွင်းခြင်းနှင့်စနစ်တကျသိုလှောင်ထားကြောင်းအတည်ပြုရန်ရံဖန်ရံခါဒေတာချွေတာ, အတော်လေးနာရီအတော်ကြာ။ ကောင်းပြီဒီနေ့ငါ eLogBook နဲ့ငါ့အချက်အလက်အားလုံးပျောက်သွားပြီ။ ဒါ့အပြင်ယခုကျွန်ုပ်သည် eLogBook ထဲသို့အချက်အလက်များကိုမထည့်နိုင်တော့ပါ။ ငါဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ကနေဒါဒေါ်လာ ၁၂ ဒေါ်လာကိုဖြုန်းတီးတာမဟုတ်ဘူး၊ သော့ခတ်ထားတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုပညာမဲ့စွာအသုံးပြုခြင်းနဲ့သင်စိတ်ပျက်အားလျော့စေသောဤဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိရိယာဖြင့်သင်၏ဒေတာများကိုအရန်ကူးခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အလှူငွေများဖြင့်ထောက်ပံ့သောအခမဲ့ Linux နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှ Dennison ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမော်ဒယ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
အဓိကအချက်စာအုပ်ကို ၀ ယ်ပါ။ သို့သော် eBookBook ကိုကြွေပြားကပ်ထားပါ။
Bryan, SV မီးသတ်မုန်တိုင်း
MARINE DIESEL BASICS မှတုံ့ပြန်မှု
SV Fire Storm မှ Bryan ကိုပြန်ပို့ပါ။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင် - သော့ခတ်စရာနေရာမရှိ၊ စကားဝှက်မရှိ၊ မည်သည့်အကန့်အသတ်မှမရှိ (ပုံစံနှင့်စာမျက်နှာအပြင်အဆင်ပြောင်းလဲခြင်းမှအပ) ။ ကန့်သတ်ချက်များသည်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်သဘောတူသည် ထုတ်ကုန်များအတွက်ပေးဆောင်ပါပြီ။ ထို့ကြောင့် eLogbook ကိုအထူးကန့်သတ်ချက်မရှိသောဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်ရည်ညွှန်းသည်မှာသင်အသုံးပြုသော pdf ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှတားမြစ်ထားသောကန့်သတ်ချက်များဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ (ဥပမာအားဖြင့် Adobe Acrobat Pro သည်စာသားများကိုထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုရန်စကားဝှက်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည်။ ) ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ Xodo pdf အက်ပလီကေးရှင်းကိုသာအကြံပြုပြီးဤဆော့ဖ်ဝဲနှင့်လုံးဝပြnoနာမရှိပါ။ Xodo pdf အက်ပလီကေးရှင်းကို သုံး၍ ပြaနာရှိပါက၎င်းကိုပုံတူကူးယူပြီးစုံစမ်းနိုင်စေရန်ကျွန်ုပ်တိုက်ရိုက်ကြားလိုသည်။
သင်၏ကြင်နာသောစကားများနှင့်ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် book2 ကိုလက်ရှိတွင်လုပ်ဆောင်နေသည်။
eLogbook နှင့်စပ်လျဉ်း။ နာရီပေါင်း ၁၀၀ အလုပ်လုပ်ပြီးနောက် eLogbook ကိုတန်ဖိုးအရှိဆုံးနှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေရန် (လက်ရှိ pdf ဆော့ဖ်ဝဲ၏ကန့်သတ်ချက်များအရ) ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့်ကန့်သတ်ချက်များမရှိပဲစက်ကိရိယာအမျိုးမျိုးအတွက်နာရီနှင့်နာရီစစ်ဆေးခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။ မှားယွင်းသောယူဆချက်များမှအလျင်အမြန်ထုတ်ပယ်ခံရခြင်းကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ကိရိယာပေါ်တွင် eLogbook နှင့်ပြaနာရှိပါက၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အခက်အခဲသို့မဟုတ်အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်အားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းကိုအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်ထုတ်ကုန်ကိုကမ်းလှမ်းသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတုန့်ပြန်မှုမရှိပါ။ Chat ကိုတုန့်ပြန်မှုမရှိပါ - တိုက်ရိုက်အီးမေးဖြင့်မတုံ့ပြန် ကျွန်တော့်အမိန့်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်း
မင်းကိုကျွန်တော်မရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ဘူးလို့တောင်းပန်ပါတယ် ကံမကောင်းစွာငါအွန်လိုင်း 24/7 မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အတူတူယုံကြည်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၌ရှိခဲ့သောပြtheနာကိုဖြေရှင်းပြီးပြီ။ ယခုသင်၏ eLogbook သည်သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေသည်။
အဏ္ဏဝါဒီဇယ်အခြေခံ ၁ - အရင်ကဆိုရင်နဲ့ပညာရှင်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့နည်းပညာလမ်းညွှန်ရှိရမည်။
Dennison Berwick သည်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဏ္ဏဝါဒီဇယ်အခြေခံ ၁ ဤစာအုပ်သည်အားလုံးအကျုံး ၀ င်ပြီး၎င်းသည်ဒီဇယ်အင်ဂျင်လှေ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်များနှင့်စရိုက်များကိုအပြည့်စုံဆုံးနားလည်ရန်လွယ်ကူပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးသည်။ လှေဝါသနာရှင်များနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ရုပ်များအားလုံးကိုအကြံပြုပါ။
Joel Flores, M / Y Alpha One, Sunseeker မန်ဟက်တန် 64 ဖိလစ်ပိုင်
Dennison Berwick သည်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤစာအုပ်သည်ရိုးရိုးလေးနှင့်အားလုံးအကျုံး ၀ င်ပြီး၎င်းသည်ဒီဇယ်အင်ဂျင်လှေ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်များနှင့်အကျင့်စရိုက်များအားလုံးအတွက်အပြည့်စုံဆုံး၊ နားလည်ရလွယ်ကူပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးသည်။ လှေဝါသနာရှင်များနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ရုပ်များအားလုံးကိုအကြံပြုပါ။
Joel Flores, M / Y Alpha One, Sunseeker မန်ဟက်တန် 64
အပြည့်စုံဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံး eLogbook အစဉ်အဆက်!
ငါဘာပြောရမလဲ ဒီမှတ်တမ်းစာအုပ်ကအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ Sunseeker မန်ဟက်တန် 64 ရွက်လှေပေါ်တွင်ငါ့မှာရှိတဲ့ဒေတာအားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပြီးပြီ။ ငါ့အချက်အလက်တွေကိုသိသိသာသာအဆင့်နဲ့စီစဉ်ထားတယ်၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးနားလည်ရလွယ်ကူသည်။ ပြီးတော့အပေါင်း၊ စက္ကူကိုချွေတာနိုင် မင်းရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ Olongapo မြို့ရှိ Subic ရှိအခြားဗိုလ်ကြီးများနှင့်အခြားသင်္ဘောသားများအတွက်ကျွန်ုပ်ဤအကြံပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုပါသည်။ ဖိလစ်ပိုင်မှာပြောတဲ့အတိုင်း Mabuhay ka Dennison Berwick! #SailingPilipinas
ဂျိုအဲလ်၊ မင်းရဲ့ကြင်နာတဲ့စကားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင် eLogbook အလွန်အသုံးဝင်သည်ကိုသင် ၀ မ်းသာပါသည်။ လက်ရှိတွင်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရပြီး Marine Diesel Basics စီးရီးစာအုပ် ၂ တွင်လုပ်ကိုင်နေပြီးလာမည့် ၁၂ လအတွင်းဖိလစ်ပိုင်သို့သွားမည်ဖြစ်ရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားမည်ဖြစ်သည်။ တွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ် ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်နိုင်အောင်တက်။ Dennison